पीएसएलः सन्दीपको टिमलाई आज जित्नैपर्ने दबाब, चम्किएलान् सन्दीप आज? - Everest Dainik - News from Nepal
पीएसएलः सन्दीपको टिमलाई आज जित्नैपर्ने दबाब, चम्किएलान् सन्दीप आज?
काठमाडौं, फागुन २५ । पाकिस्तान प्रिमियर लिग (पीएसएल) अन्तर्गत नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध लाहोर कलन्दर्सले आज इस्लामाबाद युनाइटेडसँग खेल्दै छ ।
खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका साढे ७ बजे सुरु हुनेछ । प्लेअफमा स्थान बनाउन लाहोर र इस्लामाबाद दुवैका लागि यो खेल उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
लिगमा इस्लामाबादको यो अन्तिम खेल हो भने लाहोरको अझै एक खेल बाँकी छ । ९ खेलबाट इस्लामाबादको ८ र ८ खेलबाट लाहोरको ६ अंक छ । त्यसैले उसका लागि शनिबारको खेल गर या मरको अवस्थामा रहेको छ ।
लाहोरले अन्तिम लिग खेलमा सोमबार मुल्तान सुल्तानसँग खेल्नेछ। यदि शनिबार लाहोर पराजित भएमा उसको प्लेअफको सम्भावना लगभग समाप्त हुनेछ । प्रतियोगितामा सन्दीपले १० विकेट लिएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस पीएसएलः सन्दीपकाे लय कायमै, लिए २ चर्चित ब्याट्सम्यानको विकेट